यौन काण्डमा मुछिएको परोपकारी संस्था 'अक्सफाम'लाई हाइटीमा प्रतिबन्ध, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यौन काण्डमा मुछिएको परोपकारी संस्था 'अक्सफाम'लाई हाइटीमा प्रतिबन्ध
बीबीसी । हाइटीले सन् २०१० को भूकम्पपछि कर्मचारी यौन दुर्व्यवहारमा संलग्न रहेको आरोप खेपिरहेको अक्सफाम नामक परोपकारी संस्थालाई आफ्नो देशमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ।
हहाइटीको सरकारले भनेको छ, अक्सफामले उसको देशको कानुन मिचेको छ र मानिसहरूको आत्मसम्मानको सिद्धान्तमाथि गम्भीर रूपमा प्रहार गरेको छ।
‌अक्सफामले एउटा विज्ञप्ती जारी गर्दै हाइटीका नागरिकहरूसँग माफी मागेको छ र केही पूर्व कर्मचारीका व्यवहार अस्वीकार्य भएको दोहोर्‍याएको छ। अघिल्लो वर्ष ती आरोप सतहमा आएपछि ब्रिटेनमा अक्सफाममाथिको निगरानी थप कडा पारिएको छ।
हेइटी सरकारले गएको फेब्रुअरीमा नै अक्सफामविरुद्ध अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पछिल्लो निर्णयलाई अक्सफामले आफूले बुझेको र आफ्ना केही कर्मचारीको काम पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य रहेको दोहोर्‍याएको छ।
अक्सफामले आफ्ना इटली, स्पेन र कुवेतमा रहेका कार्यालयमार्फत् हेइटीको काम गरिरहने पनि उल्लेख गरेको छ। सन् १९७८ देखि अक्सफाम हेइटीमा कार्यरत छ र सन् २०१० को भूकम्पपछि उसले त्यहाँ आफ्ना गतिविधि बढाएको थियो। तर यसै बर्षको फेब्रुअरीमा अस्थायी प्रतिबन्धपछि अक्सफामका कर्मचारीहरू हाइटीमा छैनन्।